Lasa ilay mpamafy fiadanana… | NewsMada
Lasa ilay mpamafy fiadanana…
Na katolika na mpino kristianina hafa, eny, na tsy kristianina aza, toa nahazo hery sy aim-baovao taorian’ny fandalovan’ny Papa Fransoa teto amintsika. Nananatra izy, nankahery, nampihavana, nanoro lalana. Izay ny maha mpamafy fahasoavana azy, araka ny teny filamatra tamin’ity diany ity. Samy manantena fiainam-baovao ny rehetra, na ao an-tokantrano na eo anivon’ny fiarahamonina ary, indrindra eo amin’ny fiainam-pirenena.
Na mety tsy ho tao anaty « kajikajy » aza, heverina fa tsara safidy ny fotoana nahatongavan’ity olon’Andriamanitra ity teto. Hiatrika fifidianana indray ny firenena ka mila fitoniana, mila firaisankina, mila fiaraha-mientana ary fandraisana andraikitra matotra. Heverina fa fefy tsy tokony hihoaran’ny rehetra, indrindra ny mpanao politika, ny hafatra napetraky ny Papa ray masina, amin’izao ankatoky ny fanomanana ny fifidianana kaominaly izao.
Ny fotoana toy izao indrindra mantsy no mampirongatra ny mpamafy lainga sy ny ronono an-tavy ary ny fampanantenana poak’aty. Saingy, antenaina fa nanitsy io fisainana io ny lala-mahitsy natoron’ity lehiben’ny fiangonana katolika manerana izao tontolo izao, sady filohana andrimpanjakana, ity.
Toy ny efa nizàran’ny mpanao politika malagasy, amin’ny fifidianana toy izao koa, no hamafazana fampisaraham-bazana. Kanefa, moa tsy efa endrika faratampon’ny fihavanana, izay voambolana tsy misy amin-dry zareo vahiny akory, ny nasehon’ny Papa Fransoa, raha nitafa sy nidinika ary nifandray tanana tamin’ireo mpitarika fivavahana silamo eto amintsika ?
Angamba, samy hanana izay heveriny ho fiadanana, saingy efa zava-dehibe, miteraka fanantenana vaovao, ny fiainana ao anaty fitoniana, anaty firaisankina, anaty fotodrafitrasa maro vaovao, sns. Noho izany, tsy ho ny mpanao politika, izay apetraka ho hitsikitsika hivavahana, indray no hitondra fikorontanan-tsaina sy tebiteby. Mba hamoha voa tsara ny fiadanana nafafy !